Mabhuku anodhindwa mu2018 | Zvazvino Zvinyorwa
Mabhuku anodhindwa mu2018
Nekuuya kwegore idzva, tinofanirwa kutarisa kumwedzi gumi nembiri inotevera uye zvese zvinoshamisa zvavakatichengetera. Kana zvasvika kune nyika yezvinyorwa, 2018 inovimbisa mamwe mazita ayo anofadza vanoda tsamba, nyaya dzinoshuvira uye zvipupuriro zvisina kunyorwa. Kubva pabasa rapashure raRoberto Bolaño kusvika pakudzoka kwaMario Vargas Llosa, izvi zvimwe zvezvinonakidza mabhuku achaburitswa mu2018.
1 Nhaka yevasori, naJohn le Carré
2 Pakati pavo, naRichard Ford
3 Mbeu yeMuroyi, naMargaret Atwood
4 Kujeka kwenguva, naLeonardo Padura
5 Kurara Vakanaka, naStephen King naOwen King
6 Yekuzvimiririra isina ini, naFernando Aramburu
7 Kudanwa kwedzinza, naMario Vargas Llosa
8 Mukadzi Akatsvuka-Bvudzi naOrhan Pamuk
9 Nhetembo dzakasanganazve, naRoberto Bolaño
10 Uraya Mutungamiriri, naHaruki Murakami
Nhaka yevasori, naJohn le Carré
Rakaziviswa Zuva: Ndira 9, 2018
Anonyanya kuzivikanwa mutambi webasa raLe Carré, George anonyemwerera, protagonist we Musori Akauya Kubva kuCold neMole, anodzoka mushure memakore makumi maviri muThe Legacy of Spies. Pachiitiko ichi, kuwedzera kune musori ane mukurumbira, anozove mudzidzi wake, Peter Guillam, anozodaidzwa kuLondon mushure mekuferefetwa kwakaitwa neboka risina ndangariro paCold War uye kuburikidza nemunyori anotenderera nyaya mbiri dzakafanana ichaita kuti muverengi afungire.
Pakati pavo, naRichard Ford
Rakaziviswa Zuva: Ndira 10, 2018
Imwe yei vanyori vakuru veAmerica inodzosera padhuze kupfuura nakare kose nekuenderera kweye autobiographical chinyorwa cha "Amai Vangu", yakanyorwa anopfuura makore makumi matatu apfuura. Mhedzisiro yacho ndeyekuti "Pakati Pazvo", umo Ford inomutsa nyaya yevabereki vake, majaya maviri kubva kwakadzika America akarohwa nekurwara kwemoyo kwababa vaFord paakanga achingova nemakore gumi nematanhatu ekuberekwa. Basa repedyo iro munyori anonyura mune zvakavanzika zvake zvakakosha uye zvinosvika muzvitoro zveSpanish pasi pechiratidzo cheAnagrama
Mbeu yeMuroyi, naMargaret Atwood
Rakaziviswa Zuva: Ndira 11, 2018
Mushure mekubudirira kwe akateedzana Nyaya yaMusikana, chinja renhoroondo inozivikanwa yedystopi yakaburitswa muna 1985, Canada Margaret Atwood anodzoka mu2018 nebasa rake Iyo Witch Mbeu. Yakagamuchirwa se kududzirwa patsva kwaShakespeare's "The Tempest", nyaya yacho inotenderera kuna Mr. Duke, murume anoedza kusimudzira fungidziro yevasungwa vechirango kuburikidza nemitambo, neThe Tempest iri iro mutambo unotenderera bhuku iri. Ongororo dzekutanga hadzina kutora nguva yakareba kuti dziuye uye vazhinji vari kutobvunza Atwood kuti agadzirise basa rese rehunyanzvi hweChirungu.
Kujeka kwenguva, naLeonardo Padura
Rakaziviswa Zuva: Ndira 16, 2018
Tenzi we tsvina yakashata inodzoka gore rino nerino nyowani paruoko: Kujeka kwenguva, umo vaverengi vanozoteedzazve zviitiko zve Mutikitivha Mario Conde. Pane ino chiitiko, uye mune imwe yematanho akakomba emunhu achipesana nenyika yekuCuba, Conde anogamuchira kuraira kweshamwari yakare yakabiwa mhandara nhema yakasvitswa kubva kuna sekuru vake, avo vakauya naye kubva kuCatalan Pyrenees nguva pfupi yapfuura Hondo yevagari vemo. Chakavanzika nyaya inopinda munyikadzimu yeHavana uye inoburitsa netiweki yevatengesi vehunyanzvi kusvika parizvino inenge yakavanzika.
Kurara Vakanaka, naStephen King naOwen King
Rakaziviswa Zuva: Kukadzi 1, 2018
Rakadhindwa muna2017 muUnited States uye muchiitiko chekugadzirisa nhepfenyuro yeterevhizheni mumwedzi mishoma inotevera, Kurara Runako kunoratidza kutanga kwekubatana pakati mambo wekutya nemwanakomana wake pamusoro pekutsvaga kwake kwezvinhu zvakasikwa sekuwedzera nhasi seyechikadzi. Mutaundi reDooling, Sheriff Lila anodzivirira kurara pakofi necocaine, achiedza kurwara nedenda rekurara rinoita kuti vakadzi varare uye rinovamutsa vakakiirwa mumakoko machena. Kutyisa uye chakavanzika nekubata kwechikadzi vanotora basa raMambo iro vaverengi veSpanish vachakwanisa kudya kutanga mwedzi unouya.
Yekuzvimiririra isina ini, naFernando Aramburu
Rakaziviswa Zuva: Kukadzi 27, 2018
Mushure mekubudirira (uye kuwedzera) kwe Patria, Aramburu anoburitsa zvinyorwa zvake zvega pakupera kwaKukadzi. Pakati nepakati penyaya yenyaya nerondedzero, Kuzvimisikidza pasina ini ibhuku umo munyori anotaura nezvake, asiwo nezvevaverengi vake, nezverudo, mhuri, kutya kana kusurukirwa, vachiumba mufananidzo wekunzwa kwekunyudza zvishoma, kusevha peji rega rega.
Kudanwa kwedzinza, naMario Vargas Llosa
Rakaziviswa Zuva: Kurume 1, 2018
Kutevera kuburitswa kweseti yake yekubvunzurudzwa mu Kukurukurirana kuPrinceton Nyamavhuvhu apfuura, Vargas Llosa anodzoka gore rino aine chinyorwa chitsva umo Ongorora mafungiro avo. Kubva kunyudzwa kwake muCahuide, rakavanzika boka remakomunisti, kuburikidza nesarudzo yake yemutungamiri wePeru muna 1990, munyori wePataleón neVashanyi, avo makore apfuura vakatsigira kuti aisashanyira nzvimbo dzemhirizhonga yezvematongerwo enyika, akaburitsa pfungwa dzake mukati rimwe remabhuku anotarisirwa kwazvo kutsikiswa mu2018.
Mukadzi Akatsvuka-Bvudzi naOrhan Pamuk
Rakaziviswa musi: Kurume 15, 2018.
Munyori wanhasi mukurumbira weTurkey, uye anokunda iyo Mubayiro weNobel muMabhuku muna 2006, anosvika kuzvitoro zvemabhuku zvemunyika medu nekushandurwa kwebhuku rake razvino, rakaburitswa muna2017.Mukadzi ane bvudzi dzvuku ingano, nyaya yekuzviwanikidza iyo inopa mukuru wekuchera uye mudzidzi wake, akatumwa kunotsvaga mvura mubani. renje padyo neIstanbul. Iko kusanduka kwemutambo kunouya apo murume wechidiki anosangana nemukadzi asinganzwisisike ane vhudzi-dzvuku mune rimwe guta riri pedyo
Nhetembo dzakasanganazve, naRoberto Bolaño
Rakaziviswa Zuva: Kubvumbi 12, 2018
Kunyangwe kuve iyo rondedzero yakashongedza Bolaño seimwe yeiyo vanyori vekare veLatin America vanyori, munyori akafa muna 2003 aigara achinzwa kunge nyanduri kupfuura munyori wenhau. Uchapupu hweiyi seti yenhetembo nezverudo, rufu uye hunyanzvi zviri mune Poesía reunida, anthology iyo ichaburitswa gore rino pamwe neayo Pedzisa nyaya, mamwe emabasa anotarisirwa kwazvo eakagadzika eThe Wild Detective.
Uraya Mutungamiriri, naHaruki Murakami
Rakaziviswa musi: Kuwa 2018.
Ichitevera iyo furor yakakonzerwa nekuburitswa kwayo gore rapfuura muJapan, iyo shanduro yeKilling the Commander, yazvino Murakami ichasvika gore rino munyika medu. Iye protagonist, achiremekedza legion yevanoshungurudzwa varume mune zvemunyori zvese, ndiye achangobva kurambana mufananidzo wemufananidzo uyo anosarudza kuenda kuimba iri mumakomo uko kwaachawana chishamiso pendi nemuridzi wepamberi ane zita rekuti "Kuuraya Mutungamiriri". Iri bhuku richaburitswa munyika medu pamazuva ari padyo neNobel Prize yeMabhuku, rukudzo rusingaperi urwo rwunonyorwa nemunyori weTokyo blues.
Ndeapi eaya mabhuku anotsikiswa mu2018 aunonyanya kutarisira?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Mabhuku anodhindwa mu2018
Tinotaura naAna Rivera Muñiz naFátima Martín Rodríguez, Torrente Ballester Award 2017
Makore makumi matanhatu nemasere pasina George Orwell